महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले दिए राजीनामा – Nepal Journal
महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले दिए राजीनामा
Posted By: Nepal Journal August 13, 2017 | २९ श्रावण २०७४, आईतवार १५:१५
काठमाडाैं । महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले महान्यायाधिवक्ताको पदबाट आज राजीनामा दिएका छन् । महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो राजीनामा बुझाएका हुन् । श्रेष्ठलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कानुनी सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीबाट दाहालले राजीनामा दिएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाकै सल्लाहमा आफूले काम गरेको उनले बताए। उनको एक वर्ष एक हप्ताको कार्यकालमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय निर्माण योजना, सरकारी वकिल सम्मेलनजस्ता काम भएका छन् । रासस
देउवा सरकारले गरेका के के निर्णय उल्टाउलान् अाेलीले ?
एमाले र काँग्रेस दुबैलार्इ नबिझ्ने प्रचण्डका यस्ता अादर्शका कुरा ! (भिडियाे)
बाबुरामका रामचन्द्र र रामकुमार माअाेवादी केन्द्रमा, देवेन्द्र कहिले ?
एमाले–माअाेवादी केन्द्र एकताकाे गृहकार्य भएपछि देउवा र प्रचण्डबीच भेटवार्ता